एक गुच्छा अंगुरको मूल्य रु. १० लाख – Jagaran Nepal
एक गुच्छा अंगुरको मूल्य रु. १० लाख
एजेन्सी । एउटा यस्तो प्रकारको अंगुर छ जसको मूल्य एक गुच्छाका लागि रु. १० लाखभन्दा बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया अंगुरको मूल्य रू १०० को हाराहारीमा हुने गर्दछ । तर, रुबी रोमन नाम गरेको यस अंगुरको प्रजातिको विकास सन् १९९५ मा गरिएको थियो ।
जापानको इशिकावामा यस प्रजातिको अंगुर विकास गर्नका लागि प्रीफेक्चुरल एग्रीकल्चर रिसर्च सेन्टरले अपिल गरेको थियो । रिसर्च सेन्टरले करिब २ वर्षसम्म यसको एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो । चार सय झुप्पामा केवल यसको ४ वटामात्र अंगुरको दाना आएको थियो ।
रुबी रोमनलाई इशिकावाको खजाना पनि भनिन्छ । यस प्रजातिको एक अंगुरको तौल करिब २० ग्राम हुने गर्दछ र गुच्छामा २४ अंगुर हुने गर्दछ । जापानमा रु. १० लाखभन्दा बढी मूल्य तिरेर एक गुच्छा अंगुर किन्ने गर्दछन् । यसलाई धनीहरूको फल भनेर पनि चिनिन्छ । यसको प्रयोग शुभ अवसरहरूमा गिफ्ट दिनका लागि गरिन्छ ।